NordVPN, ihe kacha VPN? Chọpụta uru ọ na-ewetara gị | Gam akporosis
NordVPN, ihe kacha VPN?
El eji VPN (Virtual Private Network) na-eto eto Site na oge mgbe ị bara ezigbo uru mgbe ị na-arụ ọrụ telefon, P2P na-ebudata ya ma jikwa ya na Wi-Fi ọha na eze maka nchekwa ka ukwuu.
VPN bụ ihe a na-ahụkarị na azụmaahịa azụmahịa, ịwụ elu ahụ bụ isi maka mgbasawanye ya na ụdị ndị ọrụ niile.
1 Gịnị bụ VPN?
3 Kedu ihe m nwere ike iji VPN?
3.1 P2P nbudata
3.2 Melite nzuzo
Gịnị bụ VPN?
Ma amaghị ihe VPN bụ? A Okwey bụ a mebere onwe netwọk na-enye ohere ka otu ma ọ bụ karịa kọmputa jikọọ na netwọk ọha na eze dịka Internetntanetị, n’enweghị mkpa kọmputa iji jikọọ ibe ha. Njikọ VPN ga-enye gị ohere ịmepụta mpaghara mpaghara, okporo ụzọ ntanetị na-aga n'ihu site na ngwaọrụ ahụ gaa na onye na-eweta Internetntanetị, mana ọ ga-aga na sava VPN nke nwere njikọ ezoro ezo maka nchekwa ka ukwuu.
N'etiti atụmatụ ya bụ ngalaba nchekwa na nzuzo. VPN dị mkpa n'ọtụtụ ọnọdụ, ebe ọ bụ na uzo mmachi na geoblocks nke ọdịnaya, enweelarị ọtụtụ ọrụ gụgharia na-arụ ọrụ na mba ndị ọzọ site na iji VPN.
N'ihi nnukwu ọganihu na teleworking, ojiji nke VPN etolitewokwa site na ụlọ wee nwee ike ịrụ ọrụ ngwa ngwa, n'enweghị nsogbu na n'ụzọ dị irè na njikọ na netwọkụ nzuzo nzuzo. Nnukwu uru nke iji VPN bụ na ọ na-arụ ọrụ na ngwa niile, ọ na-ejikọ ma na-apụ n'ụzọ dị mfe, na ya na-enye anyị nnukwu nchekwa.
NordVPN na-enye site na mbido isi ogidi na uru niile anyị kpọtụrụ aha nke ụdị netwọọdụ nkeonwe nke onwe.
? NordVPN nkwekọrịta na ọnụahịa kacha mma site na ịpị ebe a
Ihe dị iche n'iji NordVPN mee ihe ndị ọzọ dị ezigbo mkpa, ọ bụ n'ihi nke a ka ị ga-eburu n'uche nkọwa niile, n'etiti pụta ìhè ọsọ, izo ya ezo na nchekwa na ike gị ịgafe geoblocking. Mfe nke iji mee ihe ga-eme ka anyị jikọta ngwa ngwa ma nwee ike ịrụ ọrụ na nhazi dị mfe.
NordVPN ahọrọla dị ka otu n'ime ndị kacha mma VPN nyere 2020 aNgwa nwere a pụtara ọma-okokụre imewe na bụ obi ụtọ, na ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na Netflix, n'ihi ya, ọ bụ ihe na ị ga-ewere n'ime akaụntụ ma ọ bụrụ na ị na-eji gụgharia ọrụ.
Ngwa NordVPN nwere karịa 5.400 na-enwu sava ngwa ngwa zuru ụwa ọnụ, nnukwu ọsọ bandwidth na ị nwere ike ịnweta nchekwa na ọkacha mmasị gị ọdịnaya na ịntanetị. NordVPN na-eji 256-bit AES encryption algorithm nke na-agwakọta ya na igodo 2048-bit DH. FPS (Zuruzu Nzuzo Nzuzo) ga-ekenye igodo na nbanye ọ bụla dị ka a ga - asị na ị bụ onye ọrụ ọhụụ oge ọ bụla.
Kedu ihe m nwere ike iji VPN?
Netflix nwere sava dị iche iche gbasaa n'ụwa niile, ọrụ ntanetị nwere mpaghara mpaghara nke ndị ọrụ si Spain agaghị enwe ike ijikọ na ọdịnaya site na US na ntụgharị. Imirikiti ọdịnaya dị na United States dị n'asụsụ Bekee, mana enwere ike ịhụ ụfọdụ ọdịnaya akọwapụtara nke ọma na Spanish.
Netflix na-eme ngọngọ mpaghara na IP ọha, na nke a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ijikọ na Spain gaa Netflix site na US, ọ gaghị ekwe omume, mana anyị nwere ohere ịgabiga ihe mgbochi ahụ site na iji NordVPN site na iji IP ọzọ mpaghara ọzọ.VPN ma nweta ọrụ ahụ ka anyị na-eme site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
NordVPN na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịhụ ọdịnaya site na mpaghara ndị ọzọ Na mpụga Spain, anyị ga-akọwa usoro a iji hụ ọdịnaya nke US, UK ma ọ bụ mba ndị ọzọ.
Debanye na weebụsaịtị NordVPN wee budata ngwanrọ ahụ
Jikọọ na ihe nkesa na mba ahụ nwere ọdịnaya Netflix ịchọrọ ịhụ, United States, United Kingdom ma ọ bụ ọzọ
Banye na Netflix na aha njirimara na paswọọdụ gị
N'ikpeazụ, pịa ọdịnaya ịchọrọ ịhụ, na nke a ị ga-anụ ụtọ ọdịnaya ahụ na Bekee ma ọ bụ Spanish ma ọ bụrụ na ịchọọ n'etiti usoro niile, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ihe nkiri.
Otu n'ime ihe eji eme ihe banyere VPN bụ ojiji nke nbudata P2P, ụfọdụ n'ime ndị na-enye ọrụ na-egbochi nbudata ngwa ngwa ruo oge ụfọdụ, n'etiti ha bụ BitTorrent. Iji zere ụdị mgbochi a, ọtụtụ ndị ọrụ abụrụla iji VPN nke ga-enye gị ohere iji ya na-enweghị mmachi.
Ole na ole bụ ndị na-enye Internetntanetị na-ejedebe ọsọ na nbudata, ebe ọ bụ na ha na-abụkarị ndị ADSL ma ọ bụ njikọ eriri na ezigbo bandwidth na obodo. N'agbanyeghị nke a, ojiji nke a VPN ga-enye gị ohere iji ngwa ọ bụla nke nbudata na-enweghị mmachi.
Ọ bụ otu n'ime ihe ị ga-elebara anya, nke nzuzo. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbanye n’ Internetntanet na-enweghị aha, inwe ike iji netwọkụ VPN ga-enye gị ohere ịghara ichegbu onwe gị gbasara okwu gbasara ozi ma ọ bụ data gị, ebe ọ bụ na data anyị ga-adị mma iji nweta, dịka ọmụmaatụ, ụlọ akụ gị, ibe weebụ yana nbanye gị, wdg.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na-eji netwọk ọha na eze, ọ ga-adị mma ka ị jiri VPN dịka ọ bụ netwọk Wi-Fi na-emeghe na obere nchekwa. Iji jiri nke a, ọ bara uru ịrụ ọrụ VPN wee nweta njikọ na ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọ elu na ebe ndị ọzọ.
Ojiji nke VPN na-eto site na mmali na oke, ọtụtụ ndị ahịa na-eji VPN na Ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na gburugburu ebe nchekwa na nke onwe, karie ihe amamihe dị na ya mgbe ị na-ejikọ na ibe ọ bụla, ma ọ bụ ụlọ akụ gị ma ọ bụ ibe ndị ị na-agakarị kwa ụbọchị.
✅ Obi ò siri gị ike na ị chọrọ PVN? Ọfọn pịa ebe a na nkwekọrịta NordVPN na ọnụahịa kacha mma
NordVPN bụ otu n'ime kasị mma VPNs Ugbu a n'ihi ịdị mfe nke iji ya na n'ihi na ọ nwere ike ịhazi ya, ọ ga-enye gị ohere ijikọ ma kwụpụ na igodo bọtịnụ ole na ole. Ọ nwere nkwado yana nkuzi iji nwee ike ịmalite iji ya site na oge mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » NordVPN, ihe kacha VPN?
Nke a bu oke ohia di omimi na PUBG Mobile, ihe ohuru ohuru nke Tencent Games webatara
Etu esi gbanye onodu ochicho nke Instagram site na ngwa